Armada Snow Patrol ကို ၂၀၁၈ Chicago Auto Show မှာထုတ်ဖော်ပြသမယ့် Nissan! – AutoMyanmar
Armada Snow Patrol ကို ၂၀၁၈ Chicago Auto Show မှာထုတ်ဖော်ပြသမယ့် Nissan!
Nissan ဟာ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၀ ရက်နေ့မှာစတင်ကျင်းပမယ့် Chicago Auto Show မှာတော့ Armada Snow Patrol ကိုတရားဝင်ထုတ်ဖော်ပြသတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ Chicago Auto Show ကတော့ မြောက်အမေရိကန် မှာကျင်းပသွားမှာပါ။ Armada ဟာတော့နှင်းတွေထူထပ်နေတဲ့ဆောင်းရာသီကြီးမှာမောင်းနှင်းရတာလွယ်ကူတဲ့ SUV အမျိုးအစားဖြစ်ပြီး စိမ်ခံ Sedan ကားလေးမောင်းနေရသလိုခံစားမှုမျိုးကိုလည်းပေးစွမ်းနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဆောင်းရာသီမှာမောင်းရလွယ်ကူအောင်ဖန်တီးထားတာကြောင့် နှင်းတွေထူထပ်နေတဲ့တောင်တန်း၊ မြေပြန့် အစရှိတဲ့နေရာတွေအားလုံးမှာအဆင်ပြေပြေနဲ့ မောင်းနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
နောက်ကြောင်းကိုအနည်းငယ်ပြန်လှန်ကြည့်မယ်ဆိုရင် Armada ရဲ့ First generation ဟာ ၂၀၀၃ ခုနှစ်မှာစတင်ထွက်ပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ ကြားထဲမှာ တိုးမြှင့်မှုတွေပြုလုပ်ပြီး Second generation ကိုတော့ ၂၀၁၆ ဇွန်လမှာ ၂၀၁၇ Armada ဆိုတဲ့ Model နဲ့ဖြန့်ချီခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ အခု ၂၀၁၈ ဖေဖော်ဝါရီလ အလယ်ပိုင်းလောက်မှာတော့ 2018 Armada ကိုတွေ့မြင်ရတော့မှာပါ။ ၂၀၁၈ Armada ဟာ Second generation ကိုမြင့်တင်နေတဲ့ Model အဆင့်လား (သို့) Third generation အဆင့်ကိုရောက်ရှိသွားပြီလား ဆိုတာကိုတော့ တိတိကျကျမပြောနိုင်သေးပါဘူး။
Armada ရဲ့ Second generation ဟာတော့ ၂၀၁၇ ခုနှစ်မှာ ၂၀၁၆ ကထက်ရောင်းချနိုင်မှုက ၁၅၆ ရာခိုင်နှုန်းအထိတိုးတက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ၁၅၆ ရာခိုင်နှုန်းအထိတိုးတက်လာတဲ့ရလဒ်ကြောင့် Armada ဟာရောင်းအားအကောင်းဆုံး SUV အမျိုးအစားမှာပါဝင်လာပါတော့တယ်။ မြင်းကောင်ရေအား ၃၉၀ ပါဝင်မှု၊ မောင်းသူအပါအဝင် ၈ ယောက်စီးနှင်းနိုင်တဲ့အကျယ်အဝန်း၊ Intelligent Rear View Mirror နဲ့ စွမ်းရည်မြင့်မားတဲ့ V8 အင်ဂျင် ပါဝင်မှု အစရှိတဲ့အချက်တွေကြောင့် ဝယ်သူတွေမငြင်းဆန်နိုင်တဲ့ SUV အမျိုးအစားအဖြစ်ရပ်တည်ခဲ့တယ်လို့ဆိုရမှာပါ။ Intelligent Rear View Mirror ကတော့ ကားရဲ့အနောက်က ကင်မရာကနေတဆင့် အနောက်မှာဖြစ်ပျက်နေတာတွေကိုကြည့်ရှု့နိုင်မှု ဖြစ်ပါတယ်။
ပိုပြီးရှင်းသွားအောင် ၂ မိနစ်နဲ့ ၂၄ စက္ကန့်ကြာမြင့်ချိန်ရှိတဲ့ ဗီဒီယိုလေးကို ရှိုးလိုက်ပါ။
2 WD,4WD model နှစ်ခုလုံးအတွက် Armada ရဲ့အလေးချိန်ဟာ ၈,၅၀၀ ပေါင်ရှိပါတယ်။ Nissan 370Zki ကိုတောင်သာသာယာယာဆွဲသွားနိုင်တဲ့ အနေအထားပါ။ Nissan 370Zki ကလည်း Chicago Auto Show မှာပြသမယ့် ကားဖြစ်ပြီး Nissan 370Z Roadster ကိုအခြေခံပြီးဖန်တီးထားတဲ့ကားလေးဖြစ်ပါတယ်။
၂၀၁၈ Armada မှာ Second generation Armada မှာပါဝင်ခဲ့တဲ့ Feature တွေအကုန်ပါဝင်မှာဖြစ်ပြီး LED မီးအပိုင်း၊ ကားဘီးအပိုင်း၊ ကားရဲ့ Bumper ပိုင်း၊ ရာသီဉတုအပြောင်းအလဲ နည်းပညာ၊ အတွင်းပိုင်းထိုင်ခုံအနေအထား အစရှိတာတွေကိုပြောင်းလဲတိုးမြှင့်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ တိုးမြှင့်မှုမှာ Pro Comp, Smittybilt, Katzkin တို့ဆီကအထောက်အပံ့တွေယူထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ အသေးစိတ်ကတော့ 👇
2018 Chicago Auto Show ကိုတော့ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၀ ရက်နေ့ကနေ ၁၉ ရက်နေ့အထိကျင်းပသွားမှာပါ။ အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ Nissan Armada Snow Patrol, 370Zki ကားနှစ်မျိုးလုံးကိုမကြာခင်အချိန်အတွင်းမှာပဲတွေ့မြင်နိုင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။